Ọsọ Mmata Ọsọ: Ihe Mere WebSpeed ​​Okwu Infographic
Ihe Nlereanya 13 nke Otu Ntanetị Site Na-emetụta Nsonaazụ Azụmaahịa
Bọchị Sọnde, Machị 26, 2017 Bọchị Sọnde, Machị 26, 2017 Douglas Karr
Anyị edeela ihe dị ntakịrị banyere ihe ndị na-emetụta ike gị na ebe nrụọrụ weebụ ikike ibu ngwa ngwa ma kesaa otu jiri nwayọọ mebie azụmahịa gị. Ọ na-eju m anya na ọnụ ọgụgụ ndị ahịa anyị na-ajụ maka nke ahụ na-etinye oge na ume dị ukwuu na azụmaahịa ọdịnaya na nkwalite - ma na-eburu ha na onye ọbịa na-enweghị atụ yana saịtị na-ebughi oke ibu ngwa ngwa. Anyị na-aga n’ihu inyocha ọsọ nke saịtị anyị ma mee mgbanwe kwa ọnwa iji belata oge ọ na-ewe iji buru ibu.
Ngwa ngwa ngwa na-akụda ndị ọrụ, na-emetụta ahịa, ahụmịhe mkpanaka, ahụmịhe ndị ahịa, ogo nyocha ọchụchọ na mgbanwe; ihe niile na-emetụta ego gị. Ihe omuma a site na Ọkachamara, na-agagharị na nyocha 12 nke na-egosi otu esi melite oge ibu akwụkwọ metụtara nsonaazụ azụmaahịa:
mPulse mkpanaaka'ntụgharị mgbanwe bụ 1.9% mgbe ibe na-arụ ọrụ na sekọnd 2.4, mana nke ahụ na-adaba na 0.6 ozugbo ha gafere oge 5.7 nke abụọ.
Yahoo! okporo ụzọ na-abawanye site na 9% ma ọ bụrụ na ha belata oge ibu peeji site na 0.4 sekọnd.
Amazon nwere ike ida $ 1.6 ijeri kwa afọ na-enweta ego kwa afọ ma ọ bụrụ na ha peeji ibu oge na- 1 abụọ iji nwayọọ.
Bing na-akọ na nkwụsị nke 2-nke abụọ na-eduga na 4.3% furu efu ego site na onye ọbịa, 3.75% dị ole na ole clicks, na 1.8% dị ole na ole ajụjụ ọchụchọ.
SmartFurniture ndozi ndọtị nwetara ha 20% na ahịa okporo ụzọ, 14% abawanye na elele peeji, yana ịbawanye ogo site na nkezi nke ọnọdụ 2 n'otu isiokwu.
Shopzilla kpughere na peeji ndị dị ngwa na-ewepụta 7% gaa na 12% karịa ntụgharị karịa ibe nwayọ.
Microsoft na-akọ na igbu oge millisecond 400 nwere ike belata olu ajụjụ site na 0.21%.
Firefox na-ekwu na mbenata oge ibu ibu site na 2.2 sekọnd nwere ike ịbawanye nbudata site na 15.4%.
Google na-akọ na ịba ụba oge site na 100 ruo 400 milliseconds belata ọchụchọ kwa ụbọchị site na 0.2% na 0.6% n'otu n'otu.
Ihe ọ bụla ebipụ ibu ibu ọsọ na ọkara ma nweta mmụba 13% na ahịa na mmụba 9% na ọnụego ntụgharị.
Edmund asachapụrụ 7 sekọnd na oge ibu ma nwee mmụba nke 17% na nlele peeji yana mmụba 3% na ego mgbasa ozi.
eBay na Walmart melite oge ọsọ peeji ha, na-ebute mmụba n'ihe fọrọ nke nta ka ọ bụrụ njikọ aka na ntụgharị ọ bụla na saịtị ahụ!
Ọ dị mkpa iburu n'uche na ịkwesighi ịchụ àjà maka ịgba ọsọ. Anyị nyeere otu ụlọ ọrụ ama ama ama ama amaara ego tinye ego na saịtị mara mma. Designlọ ọrụ na-emepụta ihe ha họọrọ wuru ọmarịcha isiokwu site na ncha, ọrụ dị oke ọnụ. Mgbe ha bidoro saịtị ahụ na ndị na-ere ahịa Bochum dị elu, peeji ndị ahụ na-agbanye na 13 + sekọnd, ọtụtụ ndị ọrụ anaghị anabata ya. Anyị chọtara ọtụtụ okwu - gụnyere ederede na-enweghị isi na-etinye saịtị zuru oke, vidiyo ndị na-enweghị nke kachasị mma, onyogho ndị a na-ejikọtaghị ọnụ, ọtụtụ ederede mpụga, na ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ. N'ime izu ole na ole, anyị nwere saịtị ahụ na-ebugo na 2 sekọnd na-eji ọtụtụ usoro.
Agencylọ ọrụ anyị, DK New Media, mara ma dozie ọtụtụ okwu - gụnyere ederede na-enweghị isi na-ebuwanye saịtị, vidiyo ndị na-amachaghị nke ọma, onyogho ndị a na-ejikọtaghị ọnụ, ọtụtụ ederede mpụga, na ọtụtụ ụdị mpempe akwụkwọ. N'ime izu ole na ole, anyị nwere saịtị ahụ na-ebugo na 2 sekọnd na-eji ọtụtụ usoro. Idozi saịtị ahụ agbanweghị ahụmịhe imewe otu obere - mana ọ gosipụtara ọfụma ahụmịhe onye ọrụ.
Tags: ibumaxcdnmpulsepeeji nke ibupeeji nke ibu ogeihu peejiPageload ogeibe peejiọsọngwa ngwampiọsọ weebụọsọ ọsọwebspeed
Kaon AR: B2B gbara ọkpụrụkpụ Eziokwu